Uluhlu lwe-Apple Watch 6 oximeter lusebenza njengeentengiso ngokwesifundo | IPhone iindaba
Ingelosi Gonzalez | 26/09/2021 19:00 | Apple Watch, Izaziso
La impilo Liye laba ngumnqamlezo wokusika apho usebenza nezixhobo eziphathwayo. I-Apple iyakwazi oku kwaye kangangeminyaka izixhobo kunye neetekhnoloji ezithile ziye zaziswa ukubeka esweni impilo yomsebenzisi kwizixhobo zabo. Umzekelo woku kukwaziswa kwenkqubo yokwenza i-electrocardiograms kwi-Apple Watch Series 5. Kunyaka ophelileyo, nge-Apple Watch Series 6, yaziswa ioximeter ukuze ikwazi ukulinganisa ukwanda kweoksijini egazini. Isifundo sityhile oko Ukusebenza kwale milinganiselo kwiwotshi ye-Apple ebukhali kunxulumene kakhulu nemilinganiselo evela kwii-oximeter zorhwebo.
Isifundo sivelisa ukusebenza kwe-Apple Watch Series 6 oximeter
Inqanaba leoksijini yegazi (okanye ukugcwala) sisalathiso esiphambili sentlalo-ntle yakho ngokubanzi. Kukunceda uqonde ukuba ngaba umzimba wakho uyayithatha ioksijini eyimfuneko kunye nendlela eyihambisa ngayo. Uluhlu lwe-Apple Watch 6 lubandakanya usetyenziso kunye nesenzi esisebenza kakuhle, esinokulinganisa ukwanda kweoksijini nangaliphi na ixesha. Le wotshi ikhathalela ukuba uqhuba kakuhle, imini nobusuku. 1
Uphononongo lushicilelwe kwijenali eyaziwayo indalo Ngomhla wamashumi amabini anesithathu kwinyanga yoMsintsi. Inqaku elipapashwe ngegama: «Thelekisa i-SpO2 kunye nexabiso leNqanaba leNtliziyo kwi-Apple Watch kunye neeOximeter zoRhwebo eziQhelekileyo kwizigulana ezineZifo zePulmonary ».
Uvavanyo lwalubandakanya abaguli abali-100 abanesifo esinganyangekiyo semiphunga (COPD) okanye isifo semiphunga esiphakathi (i-ILD). Ezi zifo zenkqubo yokuphefumla zifuna a Ukujonga ukwanda kweoksijini yegazi kuba omabini amanqanaba aphezulu naphantsi ayingozi kulawulo lwezifo. Kungenxa yoko le nto uninzi lwezi zigulana zinee-oximeter zorhwebo ekhaya.
Uphononongo luzamile ukuqinisekisa ukusebenza kweApple Watch Series 6 oximeter kunye nokubekwa kweliso kwentliziyo ekuthatheni eli xabiso lidibanisa namaxabiso afunyenwe ngokugcwaliswa okuqhelekileyo kunye neemitha zokubetha. Okokugqibela, iziphumo zabonisa ukuba imilinganiselo yewotshi yayiphantse yafana nemilinganiselo yazo zombini izivamvo, iqukumbela oku kulandelayo:
Iziphumo zethu zibonisa ukuba iApple Watch 6 yindlela ethembekileyo yokufumana inqanaba lentliziyo kunye ne-SpO2 kwizigulana ezinesifo semiphunga phantsi kweemeko ezilawulwayo. Ukuqhubela phambili kwetekhnoloji ye-smartwatch kuyaqhubeka nokuphucula kwaye kufuneka kwenziwe izifundo zokuvavanya ukuchaneka kunye nokuthembeka kwiintlobo ezahlukeneyo zezifo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iimveliso ze-Apple » Apple Watch » Uluhlu lwe-Apple Watch 6 oximeter lusebenza njengeentengiso ngokwesifundo
I-ID yobuso iyeka ukusebenza ukuba ubuyisela isikrini se-iPhone 13 ngento engeyoyokuqala